We-EHS phezu Forex emakethe - lokhu ngempela Kuyaziwa, futhi kuba gxuma elibukhali amanani. Nokho, abanye abahlanganyeli emakethe awazi lukhulu lapho kukhona izinhlanga enjalo, kanye-ke kungenzeka kanjani ukuba umuntu zohwebo kubo, ngoba eqinisweni konke lapha akulula njengoba abaningi kungase kubonakale efika kuqala.
Ngu uqobo, GEO - umahluko phakathi intengo wayekhona ngesikhathi sokuvalwa emakethe ngoLwesihlanu, kanye ukuvulwa kwalo okwalandela ngoMsombuluko ukuthi.
Kulokhu, ngababili lwemali asetshenziswa ezifana GBPUSD, EURUSD, GBPJPY futhi EURJPY. Amathuba esivala GEO - cishe u-70%. Qala ukuhweba kuyoba cishe isigamu sehora ngemva emakethe kuvula emavikini okuqala. Ochwepheshe batusa abahwebi ezifana DC njengoba RoboForex futhi Alpari.
Uma elihunyushwe ngokoqobo, igebe - umehluko noma igebe phakathi zesito ngoLwesihlanu nangoMsombuluko. Uma kwenzeka ukuthi lo mehluko kuyaphawuleka ngempela, kwakheka eqa eside, okungukuthi, intengo impela kakhulu overestimated noma phansi uma ziqhathaniswa sangaphambilini, futhi kuyabonakala kusukela amagrafu. unokungaxhumani okunjalo akhiwa izinhlobo ezihlukahlukene izikhala.
Kungokwemvelo ukuba kukhona izikhala enjalo njalo, kodwa pair ngamunye kungabonwa isilinganiso cishe kanye ngenyanga. Ngezinye izikhathi kancane, ngezinye izikhathi ngokuvamile Ngaphezu kwalokho, iqiniso liwukuthi - izinhlobo izikhala zenzeka ngezikhathi ezithile, ngakho angakwazi futhi kufanele.
Izikhala kukhona ngenxa yokuthi ngesikhathi yinkathi emakethe uhlala avaliwe, aqoqana inombolo ngokwanele ezinkulu oda ukuthenga futhi badayise. Ngemva emakethe kuvula ngobusuku ngeSonto ngoMsombuluko, lawa ma-oda makehle ngokugcwele futhi ifomu eqa.
Yiqiniso, lokhu akusho ngaso sonke isikhathi uvele, kodwa kuphela uma kwenzeka ukuthi kukhona umehluko okukhulu ukuze adayise noma ukuthenga, okuyinto ezinqwabelene kulempelasonto. abenzi Market waphawula nabaningi oda ukudayiswa noma ukuthenga, ukuze kukhona intengo kokuba value zibukeke aphansi noma ngaphezulu ziqhathaniswa inani lemakethe esekuficile ngesonto eledlule ngesikhathi. Kuyaphawuleka iphuzu kunalokho ezibalulekile - e iningi labantu amacala ukusetshenziswa izikhala yokuhweba "Forex" emakethe njalo ukulwela ukuvala.
Imakethe kuvula at ephakeme kakhulu uma kuqhathaniswa oseduze sangoLwesihlanu, kodwa isikhathi esithile ikhuphukile, kodwa ke waphenduka banyukubala. Lesi simo kwenzeka ngaso sonke isikhathi, okungukuthi, ngemva khona-GEO, izindleko iqala fast ngokwanele ukuba alwele ukuvala ngokugcwele igebe kwakhiwa.
Ngamanye amazwi, uma sicabangela lokho GEO nokuhlaziya yayo ngentengo ephakeme ke intengo kuyoba okusheshayo kakhulu ukufuna phansi gxuma uvinjiwe ngokuphelele. Uma umehluko liyashona, bese intengo kuzokhulisa ukuvala le igebe.
Uma emakethe ngesikhathi kuvulwa kuyinto umehluko omkhulu kakhulu intengo kuqhathaniswa ne ULwesihlanu, kukhona inani elikhulu oda ehlukahlukene oda okulindile ukuthenga noma ukuthengisa. Ngakho, unyawo oda ngalinye ibekwe eduze intengo ukuthi kwaba ngoLwesihlanu. Kulokhu, abenzi emakethe azi kahle ukuthi GEO okunjalo futhi iziphi izinhlobo izikhala akhona, iqale ukushaya unyawo la oda, senziwa ngesikhathi kuvulwa emakethe, ngaleyo ndlela ukuthatha imali yena.
Ngemva ukugqagqana ephelele margin emakethe kungaba uguquke ngendlela ehluke ngokuphelele, futhi Awunawo amaphethini athile zalesi simo. Ngokuvamile, wonke izikhala bathambekele ngokushesha eduze ngangokunokwenzeka, kodwa ngokuvamile kukhona wamahhashi ngentengo ukuvulwa ngoMsombuluko, kodwa abayeki, bese uqhubeke kuphela ukukhula. izimo ezinjalo zenzeka kuphela uma kwenzeka ukuthi kukhona kakhulu, esinzulu mkhuba ukunyakaza, noma engene isenzo noma yimaphi zici ayisisekelo. Ngokwesibonelo, lokhu kwenzeka uma kwenzeka ukuthi ngesikhathi ngempelasonto kwakukhona izinguquko ezinkulu emnothweni. Ngakho, incazelo igebe lisikisela ukuthi zivale, kodwa ngaso sonke isikhathi, futhi akudingekile ukuba akhohlwe ngokuhamba ukuhweba.
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi kuleli cala akukho nzima - umane ukuthengisa noma ukuthenga bebheke ukuvala igebe emva kuvulwa emakethe, okungukuthi, ukucabanga kakulalutho isimiso, kodwa eqinisweni bonke singekho kamnandi njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Okokuqala akufanele sikhohlwe ukuthi akuwona wonke imibhangqwana ukubonisa intuthuko efanele kwezikhala, futhi ngaphezu kwalokho, kukhona amaphethini ezinye ezindaweni zokungena. Futhi ungakhohlwa ukuthi udinga ichaze "stop ukulahleka" ngoba ngokuvamile Esimweni esinjalo kwenzeka ukuthi izindleko ukuvala igebe phambi iqala ezihambayo kolunye uhlangothi.
On lokho ukuba banake?
Akuwona wonke amapheya ngidayisa ungathola intuthuko ngempela eliphezulu kwezikhala, ukuthi ukuvala ngemva nesenzakalo yabo. Kwemisebenzi yoMnyango Inkomba kwezibalo (cishe 70%) kukhona GPBUSD pair, EURUSD, GPBJPY, EURJPY. Amathuba igebe Ukuvalwa ngazimbili ezinjalo ifinyelela 70%, futhi esimweni ukuvala EURUSD amathuba wonke amapheya lincishisiwe. Ngakho, uma i-pair inikezwe of ithuba kuyinto 66%, abanye, njengoba kushiwo ngenhla, ukuze 71%.
Ngakho, uma unentshisekelo kulokho GEO bobani emasu GEPah, okokuqala kuyodingeka ukuba lokhozi la emaphahla lamane, futhi ngaleyo ndlela ukuqeda ngisho ngokuphelele EURUSD ambalwa, kusale amabhangqa amathathu kuphela, kuyilapho ezinye jikelele bamshaya yimuphi ukunakwa.
Kulokhu ongasisebenzisa cishe kunoma iyiphi esibekiwe, kodwa ngokuvamile ochwepheshe zisebenzisa i-M30, lapho ikhandlela ngamunye ingxenye yehora. Ukuhweba amahora uhlelo wenziwa kanye ngesonto kuphela uma igebe emakethe.
Kanjani ukuba athathe isinyathelo?
Kwasekuqaleni, ngemva kokuba kuvula Forex, uzodinga ukuhlola ukuthi kwakukhona ngena intengo, okungukuthi, ukuthi kukhona umehluko okukhulu phakathi ukubaluleka lokuvala ngoLwesihlanu, kanye intengo, okuyinto ekhona ngesikhathi kuvulwa ngoMsombuluko.
Uma kukhona i-GEO, kuleso simo kumele kube amaphuzu okungenani 20. Esimweni lapho ifinyelela amaphuzu 10-15 kuphela, likhuluma iyehla iyenyuka ezincane, futhi akudingekile ukuba icabange ngazo ukunakekela kwakhe. Ngo iningi labantu amacala abadayisi professional ukuncoma cabanga igebe igebe akuyona amaphuzu angaphansi kwangu-20.
Faka emakethe akudingeki ngokushesha emva kuvulwa, kodwa ngemva cishe isigamu sehora, okungukuthi, lapho ikhandlela lokuqala uvala i-M30. Ngokwezibalo samanje ngemaminithi ekucala 30 izikhala hhayi siyaqhubeka sifuna ukuvala, okungukuthi, ngemva gxuma enjalo kwenzeka iningi labantu amacala kokuqala ukuya endleleni yakhe, kodwa hhayi ohlangothini lokuvala.
Uma uke esiphethweni lokho EFG kwi "Forex" emakethe, uzodinga zifunde nokuhlukanisa. Ngamanye amazwi, uzodinga ukunquma ukuthi ibanga phakathi intengo lokuvala idlula intengo emakethe wokuvula sangoLwesihlanu ngoMsombuluko ezingaphezu kuka amaphuzu 20. Uma kukhona ngisho umehluko esinjalo, kuba kakade ngempela kungenzeka ukusho ukuthi EFG aphethwe.
Manje udinga ukuthola indlela ukungena emakethe. Isigamu sehora kamuva siqale bakwazi ukungena kwimakethe yokuphehla emva kwetheksthi ikhandlela kuqala i-M30, futhi lapha udinga ukuba siqonde injongo futhi iphuzu "ukuthatha inzuzo".
Ngokushesha kuyafaneleka yokuthi iphuzu eduze sangoLwesihlanu, lokukhulunywa ngako kulendzaba kusho njengenkulumo, futhi kuthathwe iphuzu kancane phezulu noma ngaphansi kuqhathaniswa zokugcina ivaliwe amakhandlela. Lokho, uma igebe wayevuka, kulesi simo, kungaba iphuzu proximal kakhulu ephakeme kuqhathaniswa enenani eduze ngoLwesihlanu, futhi iphuzu "ukuthatha inzuzo" kusethelwe ngisho kancane ngenhla ke.
Manje ke, kudingeka sithole oda lapho "ayeke ukulahlekelwa". Njengoba abaningi baye baphawula, phambi isifiso ukuvala igebe dostatchono intengo liziphatha ngezinga elingafani, ukuthi iyaqala ukuya ngokuphelele ngenye indlela. Lokhu kwenzeka ngenxa yokuthi abantu abaningi baqala ukuzama zohwebo sokuvalwa izikhala, kodwa abenzi emakethe professional ozama njengoba kahle ngangokunokwenzeka ukushaya emakethe lezi abahwebi. Ngakho-ke kudingekile ukuze kubhekelelwe iyehla iyenyuka anjalo esikhathini "Misa Ukulahlekelwa" ukuze kamuva lindiza emakethe, kodwa ngesikhathi esifanayo, ukuvikela inzuzo ezinhle ohlelweni. Ngakho, uma stop likhulu kakhulu ke esimweni esinjalo-70% inani eliphelele ukuthengiselana kuyoba inzuzo, ekugcineni kuzoba avele abomvu.
Ngakho, "stop ukulahleka" kufanele kube cishe nohafu ngaphezulu kwenani "ukuthatha inzuzo".
Uma stop Ngaphezu kwalokho, kule ndaba, wena nje ulahlekelwe yonke inzuzo uhlelo, kodwa kunani ephansi nje zingayeka engqongqoza yakhe, ukuze zilimale esiphawulekayo. Uma singazi okuningi baqonde umqondo wokuphathwa GEO kwi "Forex" emakethe, kubalulekile ukuba senze ngokufana ngokuvumelana le ndinganiso. Into kuphela ongayenza - iwukuba nxazonke off, bese wengeza ambalwa amaphuzu kucatshangelwe yonke ukuhluka kunokwenzeka.
Ubungazizwa kanjani-ke bheka?
Ngo iningi labantu izimo ngokuhamba kwesikhathi intengo akuyona esisivunayo, kodwa hhayi ngenxa "stop ukulahleka" okuholela GEO uvala. Kaningi kuyenzeka ukuthi izikhala zivaliwe ngokushesha ngokwanele amahora ambalwa, kodwa ngokuvamile ihlangabezane Esimweni esinjalo, uma behlala evulekile isikhathi eside, kuze ngosuku. Ngakho, uma gxuma awuzange ivaliwe ngokushesha ke akukho lutho olungalungile, kusuke kuyisikhathi sokuthandaza ejwayelekile.
Uma kwenzeka ukuthi ivalwe ikhandlela kuqala i-M30, kodwa eyayihamba kancane eqophelweni lokuba igebe, futhi ibanga umgomo unayo kancane kakhulu, ukuthengiselana okunjalo akafanele ngisho evulekile. Uma ungenayo i-target kungenzeka ngaphambi kokuvala amaphuzu okungenani 20 ke kungcono hhayi ukungena emakethe. Yiqiniso, ngaleso sikhathi emakethe uzokwazi ivale ngokuphelele phansi GEO, futhi kuyomelwe inzuzo amaphuzu 13, kodwa ngempela yini kuwufanele ingozi waphinda, ngoba kulesi simo, umgomo ngokuphelele ngeke kukusize ngalutho utshalomali.
Lelisu Kulula ngokwanele, kodwa ezimweni eziningi kuvela ukuthi ilungele abadayisi.
Ingabe kukhona nemiphumela ethile engathandeki?
Yini embi ngalo yaleli su ukuthi kuvulwa kuthengiselana kuyokwenzeka kude hhayi kaningi ngendlela umuntu afisa kwabaningi, njengoba izikhala azisenzeki izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ngesonto noma ngisho inyanga. Kodwa ngesikhathi esifanayo kuleli cala, une yithuba elihle imali ethe xaxa. Yiqiniso, ungakwazi ukuthuthukisa ukuhweba isu esiyingqayizivele, kodwa ngesikhathi esifanayo kanye ngesonto ukuze ubuke, noma gxuma oqinile intengo, ngezikhathi kokuvula isikhundla kwi isimiso esinjalo.
Kuyini i antioxidant neqhaza layo emzimbeni womuntu
10 amathiphu ngempumelelo kudlule kanjani i interview ngocingo